Distrika an’Ambohidratrimo Tanora no maro hifaninana ho depiote
Miisa 6 sahady ny nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana depiote ny omaly fotsiny araka ny tatitry ny filohan’ny OVEC eny amin’ny distrikan’Ambohidratrimo, Rasolofoarisoa Marcellin. 4 tamin’izany dia tsy miankina avokoa ary saika ny tanora no maro.
“mila tanora ny firenena mba hitondra rivo-baovao. Ilaina ny fanovana ireo lalàna efa lany andro eny amin’ny antenimieram-pirenena ary tsy mety ny manao kolikoly. Tsy maintsy jerena haingana ny fahasahiranan’ny vahoaka indrindra indrindra ny aty ambanivohitra “
“ Vehivavy mandray andraikitra no fototry ny fampandrosoana. Tsy hanaraka ny fanaon’ny depiote teo aloha izay nanao kolikoly ny tenako. Aleo hiasa amin’ny tena izy amin’izay ny depiote fa tsy hivadibadika palitao. Ny fahamarinana, ny fiasana ho an’ny vahoaka ary hiady ho an’ny sahirana no foto-kevitra ijoroako .